आज भदाै १५ गते साेमवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल - Sacho Post
आज भदाै १५ गते साेमवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
२०७७ भाद्र १५, सोमबार ०६:२७ बजे
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – आज रोकिएको काम पुनः प्रयत्न गर्दा फाइदा हुनेछ । लाभदायक नसोचेको ठाउँ बाट धन हात पर्नेछ । शुभारम्भको चर्चा पनि चल्ने छ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ,लामो समय देखि तनाव रहेको काम बन्ने योग देखिन्छ,पारिवारिक जीवनमा मतभेत रहनेछ,आजको शुभ अंक ८ रहेको छ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – आज रमाइलो यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । पेटको खराबीले स्वास्थ्य भने कमजोर रहला,घर–गृहस्थीमा भने समस्या आउन सक्छ,मनमा कुरा खेलाउदा काम बिग्रिन सक्छन, आजको शुभ अंक १० रहेको छ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) – तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्ने छ । धार्मिक कार्यमा सरिक हुने सम्भावना छ । जटिल ठानिएको काम सम्पादन हुनसक्छ । छरछिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ,बोली एवं व्वहारमा सक्दो नियन्त्रण राख्नु होला, यात्रा गर्दा अपमानित हुनुपर्ला,आजको शुभ अंक ४ रहेको छ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) – आज परिवारजनको साथ र सहयोगले नयाँ आशा पलाउने छ । मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । घरायसी वातावरणमा केही धमिलोपन आउने छ,सुरक्षाकर्मी बाट अपमानित हुनुपर्ला,सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्,अप्रिय घटना हुनसक्छ, आजको शुभ अंक ६ रहेको छ ।
सिहं(मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) – आज परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्ने छ । बेलुका पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक किचलो र विवाद हुने सम्भावना छ,मेला, उत्सव, भिडभाड बाट बच्नु होला,मानसम्मानमा बढ्नेछ,आजको शुभ अंक ४ रहेको छ ।
कन्या(टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो)– आज रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । जग्गा जमिनको कारोबारबाट राम्रो फाईदा हुनेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । गौ माताको पूजा गर्नाले शुभ कार्यमा सफलता पाइन्छ,अर्काको विश्वास पर्दा आत्मा घाती हुनेछ,पति पत्नी बिचमा मन मुटाव हुनेछ,
आजको शुभ अंक ७ रहेको छ ।
तुला-रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) – दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । सन्तान पक्षको मायामा कमी आउने छ । यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । आर्थिक समस्या पर्ने छ,झगडा पनि हुनसक्छ,खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक संकटले सताउन सक्छ,अपमान वा अपजस सहनु पर्ने हुनसक्छ,आजको शुभ अंक ७ रहेको छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)– आज अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय हो । पारिवारिक सुख मिल्ने छ । बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ,विगतका कमि कमजोरीले गर्दा हेपिनु पर्छ भने बन्न लागेको काम बिग्रिने छ,आजको शुभ अंक २ रहेको छ ।
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे)– आज शुभकार्यको चर्चा चल्ने र मनमा शान्ति छाउने छ । बन्द व्यापार र पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्ने छ । पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ,गोपनीयतामा ख्याल गर्नु होला,गुप्त रोगले सताउने छ,बोलीमा विचार पुराउनु होला,आजको शुभ अंक १ रहेको छ ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) – आज आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । आफन्तसँग मनमुटाव बढ्ला र सामान हराउन सक्ने छ अतः सचेत रहनु उचित होला । आफन्तको विश्वास पर्दा धोका हुनेछ,स्वास्थ्य प्रति सजक हुन एकदमै जरूरी छ ,उठ्नुपर्ने रकम हातलागी भए पनि तत्काल खर्चनुपर्ला, आजको शुभ अंक ५ रहेको छ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा)– अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । बुद्धिको उपयोग गर्नाले जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुन सक्छ । अनावश्यक धन खर्च हुँदा मानसिक चिन्ता वढ्नेछ,झैझगडा र विवादमा सरिक हुनु पर्नेछ,किनमेल गर्दा सजग रहनु होला झुटको आरोप लाग्न सक्छ,आजको शुभ अंक ९ रहेको छ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) – आज अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नोकरी गर्नेले मान सम्मान पाउने छन् । छोटो यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ संयम रहनु होला,संकल्प गरेको काम सफल हुनेछ,केही कुरा बोल्नु अगाडि विचार गर्नुहोला,आर्थिक समस्या पर्ने छ,आजको शुभ अंक ३ रहेको छ ।
काठमाडौको निषेधाज्ञाले मजदुर भोक भोकै सडकमा ! कता गयो सरकार ?
इबोला भाइरसको सुई पत्ता लगाउने खड्का भन्छन्- कोरोना तातोपानीले निको हुने रोग होइन, खेलबाड नगरौँ